शिक्षिकाले कुट्दा पाँच विद्यार्थीको हात भाँचियो, १४ घाइते
रोल्पा, २० जेठ । रोल्पाको एक विद्यालयमा शिक्षिकाको कुटाइबाट चौध छात्र छात्रा घाइते भएका छन् । दाङसँग जोडिएको रुन्टीगढी गाउँपालिका ८ स्थित भानु आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका लक्ष्मी पुनको कुटाइबाट चौध विद्यार्थी घाइते भएका हुन् ।
कक्षा १ देखि ८ सम्म पढ्ने विद्यार्थी घाइते भएको र उनीहरुमध्ये पाँच जनाको दाङमा उपचार भइरहेको एक स्थानीयवासीले बताए ।
घाइतेमध्ये भीमकुमारी बाँठा, निर्मला पुन, गौरी घर्ती, शान्ता नेपाली र बिमला रोकाको हातमा गम्भीर चोट लागेको छ । चोट लागेका हातमा आइतबार दाङको तुलसीपुरस्थित सहारा पोलिक्लिनिकमा प्लाष्टर गरिएको छ । उनीहरुको जोर्नी, नाडी, कुइनो र कुममा समस्या देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. घनश्याम शर्माले जानकारी दिए । डा. शर्माले भने, ‘घाइतेहरुको अनुहार पनि सुन्निएको छ । जोर्नीमा दबाब देखिएकाले सुधार आउन केही दिन लाग्नसक्छ ।’
शिक्षिका पुनले विद्यालय ढिलो आएको भन्दै लट्ठीले अन्धाधुन्ध हिर्काउँदा विद्यार्थी घाइते भएका थिए । आफूहरु लाइन लाग्दै गरेको बेला शिक्षिक पुनले अन्धाधुन्ध लठ्ठी चलाउन शुरु गरेको विद्यार्थी भीमकुमारी बाँठाले बताइन् । ‘हामी लाइन लाग्दै थियौं, मिसले किन ढिलो आयौ भनेर हामीमाथि अन्धाधुन्ध लठ्ठी प्रहार गर्नुभयो,’ बाँठाले भनिन्, ‘सबै रोइकराइ गर्न थालेपछि हेर्न नसकेर अरु सर मिसहरु अफिसतर्फ दौडिनुभयो ।’
शिक्षिकाको कुटाइबाट सामान्य घाइते हुनेहरु प्रेम पुन, सन्तोष बुढामगर, दिपा बाँठा, वीरबहादुर घर्ती, अरुणा पुन, सुशिला विक, विपना घर्ती, मनकुमारी घर्ती र पूर्णकली रहेका छन् । शिक्षिकाको कुटाईबाट कक्षा ३ मा पढ्ने नरबहादुरको कानको जाली फुटेर सुन्न छोडेको विद्यार्थीहरुले बताएका छन् ।
घटना गएको बैशाख १२ गते भए पनि वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष भीमबहादुर घर्तीको रोहबारमा औषधी उपचार गर्ने सहमतिमा मिलापत्र गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय होलेरीका प्रहरी निरीक्षक मेघनाथ चापागाईंले जानकारी दिए । विद्यार्थीको अवस्था गम्भीर बन्न थालेपछि दाङमा उपचारका लागि लगिएको उनले बताए । दुखाईका कारण रातदिन सताउने र लेख्नपढ्न समेत नसकेपछि उपचारका लागि दाङ ल्याइएको अभिभावक प्रताप घर्तीले बताए ।